WhatsApp: Maitiro ekuita mafoni efoni nevanosvika makumi mashanu vashandisi | IPhone nhau
WhatsApp: Maitiro ekuita mafoni efoni nevashandisi vanosvika makumi mashanu
WhatsApp haisati yambozivikanwa seimwe yeanokurumidza mapuratifomu kana zvasvika kune wedzera mabasa matsva, Hatizivi hongu nekuda kwekushaikwa kwevashandi, nekuda kwekuregeredza kana nekuda kwekuti haanyatsoda. Apo WhatsApp yakatanga mavhidhiyo efoni, yakavamisa kune vatori vechikamu vana.
Nguva pfupi mushure mekunge denda ratanga, akaona kuti kunyorera yanga isingashandiswe nevashandisi kuita mafoni efoni nekuda kwekukamurwa ikoko, kuchiwedzera kusvika kuvanhu vasere, iyo nhamba ichiri diki zvichienderana nezviitiko zvipi. Mutumwa pachikamu chayo, akawedzera nhamba iyoyo kusvika makumi mashanu evatori vechikamu.
Asi haana chete kusimudza iyo nhamba kune makumi mashanu vatori vechikamu, asiwo yakatanga chishandiso che desktop, yePC neMac, ichiita kuti ive yakanyanya kugadzikana yekufona vhidhiyo kuburikidza nepuratifomu iyi. Zvakare, WhatsApp yaive nhanho imwe kumashure.
Mhinduro yekuwedzera huwandu hwevatori vechikamu muvhidhiyo kufona kuburikidza neWhatsApp pasina kushandisa mari yakakosha yevagadziri, inopfuura sanganisira Messenger vhidhiyo kufona muWhatsAppNenzira iyi, tinogona kuita vhidhiyo kufona kuburikidza neWhatsApp nevashandisi vanosvika makumi mashanu.
Maitiro ekuita musangano wevhidhiyo nevashandisi vanosvika makumi mashanu paWhatsApp
Sezvandambotaura pamusoro, WhatsApp ndega haikwanise kupa vhidhiyo mafoni kune vanopfuura vasere vashandisi mumwe nemumwe, pane izvo zvaunoda, ehe kana hongu, zveMesseger application, izvo zvinotimanikidza kuisa chishandiso ichi. Kana iwe usiri kuda WhatsApp kusanganisa yako Messenger account nenhamba yako yefoni kana yako Facebook account, unogona kugadzira nyowani Messenger account nekuda kweichi chete chinangwa.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche tsvaga iyo chat yeboka kana munhu anoenda / naa kutora chikamu muvhidhiyo kufona uye tinya pane + chiratidzo uye sarudza Kamuri.
Tevere, tinya pane meseji iyo inotikoka isu shandisa Messenger.
Tevere, hwindo idzva rinozovhura kuburikidza neMessenger inotikoka isu gadzira vhidhiyo yemusangano imba. Kuti ugadzire, tinya pane Gadzira kamuri sezita remushandisi.
Ipapo inotikoka kuti tigovane iyo kero yewebhu yeiyo vhidhiyo kufona kamuri kuburikidza neWhatsApp. Kudzvanya paTumira chinongedzo kuburikidza neWhatsApp ichavhura iyo chat kubva yatakagadzira iyo kamuri kuti tigovane iyo zvakananga.
NOTA: Izvo hazvidikanwe kuve neMutumwa account kukwanisa kuwana iyo account, asi kana zvichidikanwa kuti iyo application iiswe pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp: Maitiro ekuita mafoni efoni nevashandisi vanosvika makumi mashanu
TikTok inopfuura YouTube nevateereri vevana
Peloton inouya kuApple TV nezviuru zvekurovedza muviri kuti tirege kuzorora kumba